Anniversary Gift အနေနဲ့ မြတ်ရတနာကျော် အတွက် သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် လက်ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ Ah Boy – Cele Posts
ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တော် Ah Boy နဲ့မြတ်ရတနာကျော်တို့ ကတော့ သမီးလေး Scarlett နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစု ဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထား ကြသူတွေပါ။ နှစ်ဦးစလုံးအနုပညာ အလုပ်တွေသိပ် မလုပ်ဖြစ်ကြ တော့ပေမယ့် Our Travel Diaries Page လေးကနေတဆင့် ပရိသတ်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ဗွီဒီယိုလေးတွေ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
Ah Boy ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လ ကမှ သီချင်းတွေပြန်လုပ်လာခဲ့ပြီး မောင်ချိုနဲ့အတူတူ သီဆိုထားတဲ့ အငွေ့အသက် များ သီချင်းလေးက ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး ရေပန်းစားခဲ့သလို ဒီနေ့မှာတော့ သူဖန်တီး ထားတဲ့ နောက်ထပ်သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်မံချပြခဲ့ ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ မြတ်အတွက် Anniversary Gift အနေနဲ့ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ကာ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သီချင်းလေးကိုတော့ ကျေးကျွန် ဆိုပြီး အမည်ပေးထားပါတယ်။
1500 Days …. သူမတစ်ယောက်တည်းကို မြတ်မြတ် နိုးနိုးနဲ့ ချစ်လာခဲ့တာ ဒီနေ့မှာ ရက်ပေါင်း (၁၅၀၀) ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အရာရာ ကို နားလည်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ ရက်ပေါင်း (၁၅၀၀) ဖြစ်အောင်လည်း ဖန်တီးပေး ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ မိန်းမရေ ဆိုပြီး အမိုက်စားစုံတွဲပုံလေးတွေနဲ့အတူ သီချင်းအသစ်လေး ကိုပါ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ နားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ Ah Boy ရဲ့ မြတ်အပေါ်မှာထားတဲ့ အချစ်တွေကို ခံစားမိပြီး အားကျသွားစေရမယ့် ကျေးကျွန်သီချင်းလေး ကိုတော့ JOOX မှာနားထောင်လို့ ရနေပါပြီနော်။
Anniversary Gift အနနေဲ့ မွတျရတနာကြျော အတှကျ သီခငျြးလေး တဈပုဒျ လကျဆောငျပေး ခဲ့တဲ့ Ah Boy
ပရိသတျရဲ့ အခဈြတျော Ah Boy နဲ့မွတျရတနာကြျောတို့ ကတော့ သမီးလေး Scarlett နဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာမိသားစု ဘဝလေးကို တညျဆောကျထား ကွသူတှပေါ။ နှဈဦးစလုံးအနုပညာ အလုပျတှသေိပျ မလုပျဖွဈကွ တော့ပမေယျ့ Our Travel Diaries Page လေးကနတေဆငျ့ ပရိသတျအတှကျ အမြိုးမြိုးသော ဗှီဒီယိုလေးတှေ တငျဆကျပေးနပေါတယျ။
Ah Boy ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့လ ကမှ သီခငျြးတှပွေနျလုပျလာခဲ့ပွီး မောငျခြိုနဲ့အတူတူ သီဆိုထားတဲ့ အငှအေ့သကျ မြား သီခငျြးလေးက ပရိသတျတှကွေားမှာ တျောတျောလေး ရပေနျးစားခဲ့သလို ဒီနမှေ့ာတော့ သူဖနျတီး ထားတဲ့ နောကျထပျသီခငျြးအသဈလေးတဈပုဒျကို ထပျမံခပြွခဲ့ ပါတယျ။ ဒီသီခငျြးလေးကိုတော့ မွတျအတှကျ Anniversary Gift အနနေဲ့ပေးဖို့ ရညျရှယျကာ ဖနျတီးဖွဈခဲ့တာဖွဈပွီး သီခငျြးလေးကိုတော့ ကြေးကြှနျ ဆိုပွီး အမညျပေးထားပါတယျ။
1500 Days …. သူမတဈယောကျတညျးကို မွတျမွတျ နိုးနိုးနဲ့ ခဈြလာခဲ့တာ ဒီနမှေ့ာ ရကျပေါငျး (၁၅၀၀) ရှိလာခဲ့ပါပွီ။ အရာရာ ကို နားလညျမှုတှနေဲ့ ပြျောရှငျစရာနေ့ ရကျပေါငျး (၁၅၀၀) ဖွဈအောငျလညျး ဖနျတီးပေး ခဲ့တဲ့အတှကျ ကြေးဇူး အထူးပါ မိနျးမရေ ဆိုပွီး အမိုကျစားစုံတှဲပုံလေးတှနေဲ့အတူ သီခငျြးအသဈလေး ကိုပါ မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။ နားထောငျလိုကျရုံနဲ့ Ah Boy ရဲ့ မွတျအပျေါမှာထားတဲ့ အခဈြတှကေို ခံစားမိပွီး အားကသြှားစရေမယျ့ ကြေးကြှနျသီခငျြးလေး ကိုတော့ JOOX မှာနားထောငျလို့ ရနပေါပွီနျော။
နှစ်ပေါင်း(၅၀) တိုင်အောင် နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ ရွှေလက်တွဲနိုင် ခဲ့ကြတဲ့ အဖေ နဲ့ အမေကို အမှတ်တရ စကားလေးတွေ ပြောလိုက် တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ